IVeda Arc Villa
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguAshwini
I-Eldeco Towne yimizuzu nje engama-20 ukusuka eHazratganj kunye nemizuzu eli-10 ngemoto ukusuka eKapoorthala, eyona ndawo iphambili esixekweni. Ifikeleleka lula kuzo zonke iintlobo zezithuthi zikawonke-wonke kunye nokuhanjiswa ngalo lonke ixesha longeza ixabiso kwindawo ekuyo.
Iikholoni zePosh ezifana neAliganj, iJankipuram, iPriyadarshini kwindawo ekufutshane.
Ukucaca kunye nokuxinana ukufikelela simahla ukusuka e-Aliganj ngeNdlela enkulu yaseSitapur.
Ibekwe ngobuchule kwi-150 Mt. ububanzi be-IIM Ring Road edibanisa iSitapur Road kunye ne-Hardoi Road.
I-Eldeco Towne yindawo yokuhlala ephuhliswe ngu-Eldeco Builders & Developers Ltd. iqhayisa ngezinto eziluncedo ezikumgangatho wehlabathi kunye nezibonelelo. Uluntu olusangweni olunendlela enentsimbi ekhanyiswe kakuhle, i24 x 7 yokhuseleko, ubonelelo lwamanzi, indawo yombane, indawo yokudlala yabantwana kunye nepaki yabemi abadala, indawo yokuqubha kunye neklabhu yolonwabo exhotyiswe kakuhle. uhlaza oluhle olunelizwe njalo njalo.
Le 4000 Sqft 2 yenqanaba le-villa enobunewunewu inamagumbi okulala ama-4 anegumbi lokuhlambela elincanyathiselwe, indawo yokuhlala, indawo yokutyela, indawo yokuhlala kunye nekhitshi emodareyitha. Kumgangatho ongentla kukho igumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, igadi ye-terrace kunye nedama lokuqubha.
I-Villa ifakwe ngokupheleleyo i-air conditioners efanelekileyo, iibhedi zobukhulu benkosi, i-mattress ehambelanayo, imithwalo, i-cushions, i-comforters, i-wardrobes, i-TV ye-LED, i-Router, abalandeli, i-exhaust fans, i-Fridge, izitya, izitya, izixhobo zasekhitshini, igesi kunye nesitshisi, itafile yelaptop esebenzayo, Izitulo, iitafile zokutyela, igiza, iikhethini.
iisofa eziyi-5, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
32" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Chromecast
4.0 ·Izimvo eziyi-7
Umbuki zindwendwe ngu- Ashwini
Ngemibuzo engaphezulu nceda uqhagamshelane